प्रधानमन्त्रीको संखुवासभा यात्रा – विशेष कार्यक्रम छैन, घुमघाम मात्रै ! – yuwa Awaj
प्रधानमन्त्रीको संखुवासभा यात्रा – विशेष कार्यक्रम छैन, घुमघाम मात्रै !
कार्तिक २६, २०७७ बुधबार 2
विराटनगर : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज संखुवासभा जिल्ला जाँदैछन् । दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्या’रोपण पछि काठमाडौं बाहिर ननिस्किएका प्रधानमन्त्री ओली बुधबार दश बजे संखुवासभा पुग्ने कार्यक्रम छ ।
पार्टीभित्रको आ’न्तरिक किच’लो बढिरहेका बेला उपत्यका बाहिर निस्किएका प्रधानमन्त्रीको विशेष कार्यक्रम भने छैन । उनले सडक र जलविद्युत आयोजनाको निरी’क्षण तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्नेछन् ।
संखुवासभामा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने तीनवटा कार्यक्रम तय भएको छ । संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन आचार्यका अनुसार पहिलो कार्यक्रम भोटखोला गाउँपालिका–१ किमा’थाङ्कामा राखिएको छ ।
ओलीले किमा’थाङ्कामा सश’स्त्र प्रह’रीको बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी)को निरीक्षण गर्नेछन् । त्यसपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र किमा’थाङ्काका बासि’न्दासँग छलफल गर्नेछन् ।
किथा’माङ्काबाट १०ः३६ मा भोटखोला ३ मा पर्ने च्यान्ताङ भन्ने स्थानमा जानेछन् । च्यान्ताङमा निर्मा’णाधीन विराटनगर–किमाथाङ्का सडकको निरीक्षण गर्नेछन् । च्या’न्ताङमा त्रि’देशीय महत्वको सडकको निर्माण प्रगतीबारे उनले जानकारी लिनेछन् । स्थानीय र जनप्रतिनिधीसँग पनि छलफल गर्नेछन् ।
च्यान्ता’ङ पछि १ः३० बजे भने प्रधानमन्त्री ओली अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको ड्याम निर्माणस्थल पुग्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए । मकालु गाउँपालिका–५ मा पर्ने फ्याक्सिल्लामा आयोजनाको ड्या’म बनिरहेको छ ।
ड्यामको निरीक्षण पछि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माणको प्रगतिबारे ब्रि’फिङ लिनेछन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अरुण तेस्रोको ड्यामस्थलमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई घण्टा बिताउने कार्यतालिका बनाइएको छ ।
एक खर्ब ४४ अर्ब निर्माण लागत अनुमान गरिएको अरुण ते’स्रो नौ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना हो । यसको शि’लान्यास २०७५ बैशाख २८ गते प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । अरुण तेस्रोको हालसम्म करिब ४० प्रतिशत काम सकिएको बताइन्छ ।
फ्या’क्सिलाबाट ३ः३० मा प्रधानमन्त्री ओली काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम तय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले जान’कारी दिए । ‘उदघाटन र शिलान्या¥सको कार्यक्रम तय भएको छैन, निरीक्षणको कार्यक्रम तय भएको छ,’ उनले भने, ‘यो विशु’द्ध अनुगमन भ्रम’ण हो ।’अन्लाईन खबर बाट
Prevप्रचण्डलाई ‘घर–पार्टी अफिस, पार्टी अफिस–घर’ जानबाहेक लखर–लखर हिड्न प्र तिबन्ध लगाउनुपर्छ…हेर्नुहोस् ।
Nextको’रोना विरु’द्धको औषधि – नेपालकै जडी’बुटी परीक्षण…हेर्नुहोस् ।